डा. केसीको माग पूरा भैसकेको छ – राज्यमन्त्री यादव « Farakkon
डा. केसीको माग पूरा भैसकेको छ – राज्यमन्त्री यादव
काठमाडौँ, माघ ७ । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सुरेन्द्र यादवले अनशनरत प्राध्यापक डा गोविन्द केसीको सबै माग पूरा भइसकेको बताएका छन ।
रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित साक्षात्कारमा उनले भने, “काठमाडौँमा मेडिकल कलेज खोल्न नदिने डा केसीको माग सम्बोधन भइसकेको छ । अब नयाँ मेडिकल कलेज काठमाडौँमा खोलिने छैन । यसबाट मनमोहन अधिकारी मेडिकल कलेज पनि प्रभावित भएको छ ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता डा सुरेन्द्र भण्डारीले डा केसीको माग पूरा नगरेर स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या सरकार स्वयंले उत्पन्न गरेको बताए। उनले यो समस्या समाधानको पोको सरकारसँग रहेकाले सरकार लचिलो भई केसीसँगको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन ।